जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण - नेपालबहस
जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण
| १९:३६:४२ मा प्रकाशित
९ फागुन, काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नेप्से पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । साताको पहिलो दिन आजको कारोवारमा अत्यधिक लगानीकर्ता जलविद्युत कम्पनीको शेयर खरीद बिक्रीमा लालायित देखिएका छन् ।
सोही कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ४९ को वृद्धि भई रु ५३९ मा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट आगामी चैतको अन्तिम सातादेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
आजको कारोवारपछि नेप्से ३.६६ विन्दुले सुधार भई दुई हजार ६४०.३४ मा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.२० विन्दुले घटेर ४७९.५८ मा ओर्लेको छ । कूल २०७ कम्पनीको दुई करोड ४३ लाख पाँच हजार ६६ कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ८३ करोड ४६ लाख तीन हजार ९६७ मूल्यमा खरीदबिक्री भए ।
कारोबार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आज पाँच उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ भने सात उपसमूहको शेयर भने वृद्धि भएको छ । बैंकिङ ७.१३, वित्त ४.१८, निर्जीवन बीमा ८३.८८, लघुवित्त ४५.४६ र जीवन बीमा ३६१.४६ ले घटेको छ । यस्तै व्यापार १६.५, होटेल १२.१७, विकास बैंक २९.३२, जलविद्युत् ८३.२७, उत्पादन ४.४४, अन्य ३९.९१ र सामूहिक लगानी कोष ०.८२ ले वृद्धि भएको छ । आजको कारोवार पछि बजार पूँजीकरण रु ३६ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड ८० लाख ९१ हजार ३६१ बराबर पुगेको छ । यो देशको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ‘जिडिपी’को हाराहारी नै हो ।
कारोबारका आधारमा माथिल्लो तामाकोशी र शिव श्री हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले समान १० प्रतिशतले कमाउँदा, नेपाल पूर्वाधार बैंक ९.८९, नेपाल हाइड्रो डेभलपमर ९.८२, चन्द्रागिरि हिल्स ९.८०, समृद्धि फाइनान्स ९.७७, एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड ९.७५, एनएमबी हाइब्रिड फन्ड ८.४६ र लिबर्टी इनर्जीका लगानीकर्ताले ८.१३ प्रतिशतले कमाए । यस्तै बेस्ट फाइनान्स ३.३७, किसान लघुवित्त ३.२७, सबैको लघुवित्त ३.२७, समिट लघुवित्त ३.२४, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स ३.२०, लक्ष्मी लघुवित्त ३.१५, सनराइज बैंक ३.१५ र लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ३.१५ प्रतिशतले गुमाए ।
बजारमा करेक्सन जारी, कहाँनेर पाउला टेवा ? ३ हप्ता पहिले
बजारको आजको करेक्सनलाई कसरी हेर्ने ? ४ हप्ता पहिले
बजार पूँजीकरण ३२ खर्ब, शीर्ष दशमा रहेको कम्पनीको यस्तो छ विवरण १ महिना पहिले
बजार वृद्धि हुँदा पनि किन भयो मैनवत्ति रातो ? हेरौ आजको बजार विश्लेषण २ महिना पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकको लाभांश घोषणा, संस्थाको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७ करोड ! २२ घण्टा पहिले
अभिभावकको माया, स्नेहमा बस्न कसलाई पो मन हुँदैन र ? ७ दिन पहिले
तेलको मूल्यवृद्धिसँगै ओपेक मुलुकबीच कोटा निर्धारणको विषयले तनाव बढ्यो ५ दिन पहिले
अभियानकर्ताले दिए काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि धर्ना ७ दिन पहिले
मौलाकालिकाको पदमार्गमा ढुङ्गामा कुँदिएका आकर्षक मूर्ति २ दिन पहिले
नेप्सेको गिरावट : करेक्सन मात्रै हो कि “वेयरिस ट्रेण्ड” को सुरुवात ? ६ दिन पहिले
कैदीबन्दीबीच भएको झडप अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन ६ दिन पहिले
वादी समुदायको माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह १ हप्ता पहिले
विद्युतीय बस किन्न फेरि साझालाई नै जिम्मा ४ हप्ता पहिले
विघटिन प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गर २ हप्ता पहिले
काठमाडौंबाट लागुऔषधसहित एक बालक पक्राउ १ दिन पहिले
‘त्यस्तो नगर्न’ भन्दै कृषिमन्त्रीले लेखे गृहमन्त्रीलाई पत्र ! ९ महिना पहिले
भिरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाकाे मृत्यु ३ महिना पहिले
यसपालि छैन तीजको रमझम ७ महिना पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप २० जनाको मृत्यु ५ महिना पहिले